PPSSPP: emulator PSP malaza sy matanjaka | Avy amin'ny Linux
PPSSPP: emulator PSP mahazatra sy mahery
Luigys toro | | fampiharana, GNU / Linux, Games
2016 dia taona iray nisamborana ny vaovao rehetra ny lalao video, ity indostria matanjaka ity dia nanao ny azy ary nanitatra ny fahafahan'ny lalao ho an'ny linux. Na izany aza, mbola mankafy ny anay ireo tia ny kilasika PSP o NintendoAnkehitriny, ireo izay tsy manana console toy ny PSP dia tsy tokony hatahotra, manolotra a emulator PSP mahery antsoina hoe PPSSPP (Faharanitan-tsaina be amin'ilay anarana, tsia?).
1 Inona ny PPSSPP?
2 Fomba fiasa PPSSPP
3 Ahoana ny fametrahana PPSSPP amin'ny Linux
3.1 Mametraka PPSSPP avy amin'ny azo sintonina
3.1.1 Ampidiro SDL2 amin'ny alàlan'ny mpitantana fonosana distro anao
3.2 Mametraha PPSSPP amin'ny ubuntu sy ny derivatives
3.3 Mametraka PPSSPP amin'ny archlinux sy ny derivatives
4 Fehiny momba ny PPSSPP
Inona ny PPSSPP?
PPSSPP dia tetikasan'i loharanom-baovao misokatra, nahazo alalana tamin'ny GPL 2.0 ary nosoratana tamin'ny C ++ nataon'i Henrik RydgÃ ¥ rd. Mamela anao hilalao lalao PSP amin'ny Computers, amin'ny finday sinoa tsara indrindra ary Tablets, dia multiplatform (Linux, Windows, Android, MacOSX ...) io, miova amin'ny famahana ny fitaovantsika sy milalao lalao amina kalitao azo tsapain-tanana.
Toy izany koa, ity fitaovana ity dia manolotra ny mety hampidirana ny firafitra amin'ny lalao, ny fanaingoana ny fanaraha-maso, ny fanaovana kopian'ny lalao misy antsika, miaraka amin'ireo fiasa maro hafa izay mahatonga azy io ho emulator PSP lehibe.
Fomba fiasa PPSSPP
Mamela anao hilalao amina fanapahan-kevitra maro (ao anatin'izany ny famaritana avo).
Fifanarahana hilalaovana amin'ny telefaona Tablet sy finday.
Fahaizana manamboatra fanaraha-maso ny efijery na mampiasa mpanara-maso na fitendry ivelany.
Mitahiry sy mamerina amin'ny laoniny ny fanjakan'ny lalao na aiza na aiza,
Fampidirana ny firafitra amin'ny lalao.
Azo ampiasaina amin'ny saika CPU rehetra izy io, ny GPU dia tsy maintsy mitantana OpenGL 2.0.
Fahaiza-mifehy amin'ny lalao marobe.
Ahoana ny fametrahana PPSSPP amin'ny Linux
Azontsika atao ny mametraka PPSSPP amin'ny iray amin'ireto fomba manaraka ireto:
Mametraka PPSSPP avy amin'ny azo sintonina
Noho izany dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto isika
Ampidiro SDL2 amin'ny alàlan'ny mpitantana fonosana distro anao
Ho an'ny Debian / Ubuntu ary ny derivatives: Ampidiro ny fonosana "libsdl2-dev".
Ho an'ny Fedora / RHELy Derivatives: Ampidiro ny fonosana "SDL2-devel".
Ho an'ny disto miorina amin'ny BSD: Apetraho ny fonosana "sdl2".
Sintomy ny PPSSPP mifanaraka amin'ny maritrano PPSSPP (zip, amd64) o PPSSPP (zip, i386).
Mametraha PPSSPP amin'ny ubuntu sy ny derivatives
Manokatra console ary mihazakazaha baiko manaraka ireto
sudo add-apt-repository ppa: ppsspp / stable sudo apt-get fanavaozana sudo apt-get install ppsspp
Mametraka PPSSPP amin'ny archlinux sy ny derivatives
Sokafy fotsiny ny console iray ary araho ity baiko manaraka ity
Fehiny momba ny PPSSPP
Ity emulator PSP fanta-daza ity dia nanampy ahy be dia be, satria tsy mandany loharanon-karena be izany, saingy tsy midika izany fa tsy manana fampisehoana avo lenta izy rehefa milalao miaraka aminy, taloha be aho nandany ora maro tamin'ny fampiasana azy ireo sy tao ny kinova farany izay nohatsarain'izy ireo be.
Mora ny mampiasa azy amin'ny mpanara-maso (misy maro mifanentana amin'ny Linux), tsotra ny fahazoana lalao sy fametrahana azy, fa manandrama mampiasa kopia "ara-dalàna" foana. Manantena aho fa ny emulator dia mamela anao hankafy ny lalao tianao indrindra, manoro hevitra manokana aho Ady misokatra amin'ny kankana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » PPSSPP: emulator PSP mahazatra sy mahery
Ivan Sainz dia hoy izy:
Fandraisana anjara lehibe, misaotra!
Valiny tamin'i Iván Sainz
Automation marketing: inona izany ary ahoana no hanampiany anao?
Avadiho ny fonosana Debian .deb ho fonosana Arch Linux